Ku soo dhawaaw degmada Kungsbacka
Halkan waxaan idinkugu soo koobnay warbixin ku saabsan adeega dadweynaha oo aan usoo bandhigno dhammaan degmada Kungsbacka. Warbixin faahfaahsan oo inglish ahna way jirtaa, midka dhameystiran waxa uu ku qoranyahay af-iswiidhish.
Soo dhawoow hadii aad qabto Su’aalo oo dhiibo aragtidaada adigoo toos telefon ama email kula soo xiriiraya xafiiska adeega macmiisha ee degmada, ama nasoo booqo si aad u hesho adeeg gaar ahaaneed. Waxaan ugu horreyn kugu caawin karnaa luqada inglishka ah.
Kungsbacka – degmo dad badan doonayaan in ay degaan
Kungsbacka waxey ku taallaa dhinaca xeebta Iswiidhen wax yar koonfurta Göteborg. Degmeda dhineceeda galbeed waxaa ku yaal xeeb, dhineceeda barina waxaa ku yaala dhul beereed, duur iyo webiyaal.
Halkan waxaad ka heleysaa maabka degmeda meeshaa oo aad ka raadin karto ciwaano.
Kungsbacka waxaan ku degenahay dad ku dhawaad gaaraya 84 000 oo qofood, waxaan dhisnaa 500 oo guryo cusub ah sanadkiiba. Dadka badankood waxey degenyihiin halkan, laakiin waxey ka shaqeeyaan degmooyin kale. Wey fududahay in tariinka loo qaato dhinaca woqooyi ee Göteborg iyo Borås, dhinaca koonfurna Varberg, Falkenberg iyo Halmstad.
Waxaan siinnaa adeega bulshada qeybihiisa kala duwan:
Waxbarasho iyo xanaanada carruurta
Waalidiinta shaqeysa ama wax barata waxey xaq u leeyihiin xanaanada carruurta inta ay ilmahooda ka gaarayaan labo iyo toban sano. Kan shaqa la’aanta ah waxa uu xaq u leeyahay xanaanada saacado yar. Caruurta yaryar waxey leeyihiin dugsiga xannaanada carruurta iyo carruur haye ama carruur heyso. Dugsiga xannaanada carruurta waxey carruurta ka helaan xannaano laga bilaabo halsano jirka ilaa ay inta iskoolka ka bilaabayaan, markaana waxey aadayaan qeybta xiliga firaaqaha ee iskoolka. Meesha carruur hayaha waxey carruurta da’doodo tahay 1-12 ka helayaan xannaano oo tii jawiga guriga oo kale ah.
Iskoolka hoose dhexe waa qasab dhammaan carruurta marka ay buuxiyaan lix sano. waxey bilaabayaan markaa fasalka xannaanada. Carruurtu waxey iskoolka hoose dhexe dhiganayaan illaa iyo fasalka sagaalaad. Kungsbacka waxaa jira fursado lagu kala dooran karo iskoolaadka degmada iyo kuwa kaligood taagan kuwaa oo dhinacyo kala duwan leh.
Si uu canugaaga boos ugu helo xannaanada ama iskoolka hoose dhexe waa in aad la xiriirtaa xarunta maamulka iskoolka ee degmeda. Lasoo xiriir xafiiska adeega macaamiisha markaa wey ku caawinayaan.
Kungsbacka waxaa ku yaala dusiyo sare oo lakala dooran karo kan degmada iyo kan sida gaarka loo leeyahay. Wax waad baran kartaa haddii xataa aad weyntahay waxbarashada dadka waaweyn ama iskoolka xirfada.
Carruurta iyo ardayda ku hadla luqad aan iswiidhishka eheen waxa ay xaq u leeyihiin caawinaad ama in ay dhigtaan luqadooda hooyo oo ay ka dhigtaan xannaanada ama iskoolka.
Hadii aad ku cusubtahay Iswiidhen oo aad tahay qof weyn waxaa jira SFI-waxbarasho, iswiidhishka qaxootiga loogu talagalay. SFI waa wabxbarashada aasaaska ee luqada iswiidhishka oo loogu tala galay qofka ay luqadiisu hooyo aysan eheen iswiidhishka.
Qofka ku cusub Iswiidhen waxaa kale jira koorso ah ku hogaaminta bulshada. Waxey ka koobmaan warbixino kusaabsan qaanuunka iyo sharciyada iswiidhen, xuriyad iyo sida ay xafiisyada dowlada ee iswiidhen u shaqeeyaan. Koorsooyinkaas waxaa laguugu dhugayaa luqadaada hooyo.
Wasaarada waxbarashada wexey leedahay boga internetka oo qaas ah oo aad ka heli karto warbixino dheeraad ah oo ku saabsan sisteemka waxbarasho ee iswiidhen oo luqado kala duwan ku qoran.
Daryeel, taageerid iyo caawinaad
Degmeda waxey taageere usoo bandhigeysaa carruurta, qoysaska, dadka waaweyn, dadka cuuryaanka ah iyo dadka wax sixun u isticmaala ama dhibaatadaba bulshada.
Waxaa xil naga saaranyahay xitaa in aan qaabilno qaxootiga iyo carruurta iyo dhalinyarada kaligood soogala wadanka. Degmada waxaa xil ka saaran:
In aad adiga degmadu kuu qoondeyso in aad degenaanshi hesho
In aad hesho SFI- wacbarashada, iswiidhishka loogu tala galay qaxootiga
In aad hesho koorsada hogaaminta bulshada
In ay carruurtaada iskool helaan. Taa waxey quseysaa xitaa carruurta magangalyo doonka ah.
Hogaamiyaha qaxootiga iyo saaxiibka luqada ee Kungsbacka waa hab ay soo galootiga iyo qaxootiguba ay ula kulmayaan iswiidhishka. Waxaan idinka caawineynaa si aan isku kiin aadino tusaalo ahaan waxa aad xiiseysaan waxaana idiinsoo bandhigaynaa siyaabo kala duwan oo aad iskula socotaan. Hadii aad ku cusubtahay Iswiidhen oo aad dooneyso in aad muraajaceyso iswiidhishkaaga oo aad barato iswiidhish waxaad iska diiwaan kalin gartaa si aad ula kulanto hagaha qaxootiga.
Hadii aad xanuunsato waxaad aadeysaa marka ugu horaysa rugta caafimaadka. Rugta caafimaadka waxaa laga hagaa gobolka Halland, waxaad ka heli kartaa warbixin iyo meelaha aad la xiriireysid boga internetka ee rugta caafimaadka ee gobolka Halland.
U arkaya iyo samaynaya
Kungsbacka waxaad ka heleysaa waxyaabo badan oo aad sameyn kartid waqtiyada firaaqada. Waxaad tusaale ahaan ka helaysaa inaad ku dabaalato meelaha dabaasha oo gudaha ah ama banaanka, waxaad ciyaari kartaa kubada cagta, waxaad aadi kartaa bandhiga tiyaatarka, ama daawan kartaa farshaxanka ama aqrisan kartaa ama isticmaali kartaa kombiyuuterada maktabada yaal – halkan waxaad ka heleysaa waxyaabo badan oo aad kala dooran kartid.
Jadwelkeena munaasabadaha waxaad ka heleysaa warbixino ku saabsan munaasabadaha iyo firfircoonika ka dhacaya Kungsbacka.
Kungsbacka waxa ay leedahay jaaliyado waa weyn oo shaqeeya meeshaa oo aad ka baran karto dad cusub oo aad wada qeybsataan danahaaga. Jaaliyadaheena diiwaan gashan waxaad ka heleysaa jaaliyado oo badan oo xiisooyin kala duwan leh sida ciyaaraha, farshaxanka, dhaqanka, lagu leydhsado oo hiwaayado kala duwan leh.
Jadwelka munaasabadaha iyo jaaliyadaha diwaan gashan waxdaan ku heleysaa iswiidhish oo kaliyah laakiin lasoo xiriir xafiiska adeega macaamiisha si ay kuu caawiyaan, ugu horeyn iswiidhish iyo inglish.
Hadii aad dooneyso in aad ku tababarato in aad ku hadasho iswiidhishka waxaad imaan kartaa meesha lagu qaxweysto ee degmada. Meeshaa waxaad la kulmi kartaa dad ay luqadoodu hooyo tahay iswiidhish. Wax lacag ah ma’ahan. Warbixin intaa dheer oo ku saabsan koobta iyo waqtiga waxaad ka heleysaa boga interneetka ee maktabada ama jadwelka munaasabadaha ee degmada raadi "språkcafé" ama ”språkkafé”.
Dhalinyarada Kungsbacka waxa ay helaan taageero iyo caawinaad tilmaamid ku saabsan dhamaan waqtiga firaawada. Halkan waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah oo inglish ah kuna saabsan shaqada dhalinyarada ee Kungsbacka.
Hadii aad tahay qof dalxiis ku ah Kungsbaka waxaad warbixin inglidh ah ka heli kartaa boga internetka dalxiiska ee Kungsbacka.
Dhismo, degitaan iyo deegaan
Waxaad la xiriireysaa degmeda hadii aad dooneyso in aad codsato ogolaanshaha dhismaha ama hadii aad u baahantahay caawinaad ku saabsan biyaha iyo bulaacadda, laakiin hadii aad dooneyso in lagaa qaado bulaacaddaada ama aad dooneyso in aad ogaato sida ugu fiican ee aad qashinkaaga dib ugu cosboonsiin karto. Tan waxa ay quseysaa ugu horreen qofka degan guryaha qoyska.
Haddii aad dooneyso in aad kireysato guri, waxaad iska diiwaan galin kartaa xafiiska xiriirka guryaha ee degmeda. Xafiiska xiriirka guryaha qeybta warbixinta casriga waxaad ku heli kartaa luqada afka iswiidhishka. Hadii aad qabtid su’aalo la xiriir xafiiska adeega macaamiisha ee degmeda.
Wax soosarka ganacsiga iyo shaqada
Degmeda Kungsbacka waa degmada ugu weyn ee shaqo bicinta. Waxaa nahay qiyaasti 7 900 aa jaqaalo oo ka shaqeeyo 250 shaqo oo kala duwan.
Dagmada waxaa ku yaala shirkado badan oo yayar iyo kuwo waaweyn oo ah kuwa ganacsi, shaqodhismeed iyo shaqooyin loo qabanayo shirkadaha.
Degmadu waxey edeeg siineysaa shirkadaha, waxeyna kaalmeysaa warshadaha cusub wexyna fiiro gaarah siiyaan shaqooyinka kala duwan.
Boga interneetka ee xafiiska shaqada waxaad ka hellleysaa shaqooyinka ee banaan oo dhan
Halkan waxaad ka heleysaa shaqooyinka dhan ee banaan ee degmada
Shirkada wada shaqeynta Almi waxey bixineysaa talo xibin ay ku bixiso luqado kala duwan adiga rana in aad shirkad furato ahna ajnabi
Waxaad heleysaa warbixino ku saabsan sida ay tahay in iswiidhen laga shaqeeyo
Waxaad heleysaa warbixin ku saabsan sida looga furto shirkad aad leedahay iswiidhen
Degmo iyo siyaasad
Degmeda Kungsbacka waxey leedahay wax la mid ah degmooyinka kale ii iswiidhen, urur siyaasadeed iyo urur maamul.
Ururka siyaasada wuxuu ka kooban yahay hoggamiyaasha degmada, gudiga degmada iyo hey’ado badan oo leh mas'uuliyad degmadeed. Gudiga degmada iyo inta badan hey’adaha waxey leeyihiin maamulo u gaar ah oo u qabta shaqada maalinlaha ah.
Afartii sanaba mar ayey u codeeyaan dadka Kungsbacka xisbiyada oo qaadanaya 61 boos ee hogaamiyayaasha degmada.
Halkan waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah oo af inglish ku qoran ka hadlayana adeega bulshada ee degmeda Kungsbacka.
Boga interneetka ee informationssverige.se waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan Iswiidhen iyo Kungsbacka oo luqado kala duwan ku qoran una fiican qofka wadanka Iswiidhen ku cusub.